BreakingNews: Wasiir Soomaaliyeed oo ka shaqeeyay in Canada ay magangalyo siiso Soomaalida Laga Masaafurinayo Mareykanka | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
BreakingNews: Wasiir Soomaaliyeed oo ka shaqeeyay in Canada ay magangalyo siiso Soomaalida Laga Masaafurinayo Mareykanka
Dowlada Canada ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inay marti galin doonto Soomaalida iyo sinjiyadaha kale ee Muslimiinta ah oo ay saameynayso go’aanka Madaxweynaha Mareykanka uu uga mamnuucay galintaanka dalkaas.
Dowlada Canada ayaa sheegtay in dalkeeda ay siin doonaan deganaanshaha ku meel gaarka ah kuwa ku xayiran ganaaxa socdaalka Maraykanka uu soo rogay Madaxweynaha Donald Trump.
Wasiirka Socdaalka iyo Sinjiyada Kanada, Axmed Dirir Xussen oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Somalia, ayaa sheegay in dowladiisa Canada ay qaabili doonto dadka uu soo eryay Donald Trump.
“Dal kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu go’aamiyo siyaasadahooda. Waxaan kaliya oo aan idiin sheegi kara in aan sii wadi doonaa dhaqankeena soo jireenka-ee ah inaan soo dhaweeno kuwa doonaya magangalyada,” ayuu yiri Ahmed Dirir .
Wasiirka ayaa la sheegay inuu lahaa fekerka ay dowlada Canada ku aqbashay marti galinta Soomaalida iyo Muslimiinta kale ee uu soo eryay Madaxweyne Donald Trump.
Wasiirka Socdaalka iyo Sinjiyada Kanada, Axmed Dirir Xussen, ayaa sheegay in dowladiisu aysan ku dhaqaaqi doonin isir naceeb iyo in dadka lagu kala sooco diinta ay aaminsan yihiin, sidaa darteedna ay dowladiisu aqbashay go’aanka marti galinta.
Wasiirka Socdaalka iyo Sinjiyada Kanada, Axmed Dirir Xussen, oo ku dhashay Soomaaliya, mid ka mid ah dalalka ku jira liiska 90-maalin la saaray xayiraadda safarka Trump, ayaa ku daray in Canada ay sii dheereen doonaan deganaanshaha ku meel gaar ah ee kuwa ay xaalada xun saameeysay.
Dhinaca kale, Wasiir Axmed Dirir Xussen, ayaa sheegay inaan loo dulqaadan karin go’aanka degdega ah ee uu gaaray Donald Trump, sidaa darteena ay qaaten go’aan lagu badbaadinaayo Muslimiinta uu xayiraada saaray Donald Trump.